Ogaden News Agency (ONA) – Ardaydii Jaamacadda oo markay ka xumaadeen ihaanadii loo gaystay kitaabka Ilaahay la la’yahay meel la geeyay
Ardaydii Jaamacadda oo markay ka xumaadeen ihaanadii loo gaystay kitaabka Ilaahay la la’yahay meel la geeyay
Posted by ONA Admin	/ June 3, 2011
Jigjiga – Waxaa sii xoogaysanhaya khilaafkii ka dhashay labadii xaashiyood ee qur’aanka ahaa ee la dhex-dhigay suuliga halka lagu kaajo badhtankeeda ee jaamacada jijiga oo arday xabashi ah si ula kac ah u sameeyay. Arintaa oo uu ina Laba Go’le ugu hanjabaydadweynihii ku soo xoomay inay yihiin nabadiid oo uu laynayo hadaanay ka kala dareerin goobta lagu ihaaneeyay kitaabka Ilaahay.
Waxaa sii xumaanhaysa xaaladda kadib markii ay ardaydii jaamacadda u kala safteen gaal iyo islaam oo gacan qaad xoog leh uu ka dhacay jaamacadda dhexdeeda iyadoo oo dhaawacayo dakharo ah loo gaystay dhawr arday oo ka mid ah ardayda masixiga ah.
Si loo maquuniyo ardayda ka gadooday meel ka-dhaca loo gaystay xurmada kitaabka Ilaahay ayaa waxaa maanta lagu soo daabulay jaamacada ciidan Yihaadhig ah oo laga keenayay xeryaha Garabcase iyo meelaah ay ka daganyihiin Jigjiga kadibna kuwaasoo la wareegey gacan ku haynta jaamacada oo ku khasbay ardaydii inay galaaan qololkooda oo aan la arki karin laba qof oo baraxada wada taagan. Ciidankii Yihadhigta iyaana caawa ku gaafan gudaha iyo hareeraha jaamacada. Ardaydii Soomaalida ayaa hadda iskaga soo baxday xeradii jaamacadda oo soo martiyey xaafadihii qaraabadooda ahaa iyo aradaydii ee dadkoodu daganaayeen magaalada gudaheeda.
Waa maalintii afaraad oy gabi ahaanba Jaamacadu hawleheedii ay taaganyihiin mana muuqato wax isbadal ah oo soo socda illaa iyo hada. Waxaa intaas dheer in labaale iyo yihaadhig-tuba ay maanta soo xidheen arday kabadan boqol qof kuwaas oo aan la garanhaynin meel la geeyay laakiin la filayo in lagu haysto xeryaha ciidamada.
Waxaa xaalada sii walaaqay iyadoo dawladda Itoobiya iyo ciidanka dalka xukuma ay ku mecnaysay kacdoon lala rabo ardayda inay sameeyaan oo ay ka danbeeyaan siday leeyihiin kooxo siyaasadeed oo raba rashbado inay ka bilaabmaan Jigjiga kuna faafaan dalka intiisa kale si ay bilaw ku dayasho leh ugu noqoto dadkii balansanaa ee wali is huursan.
Gumaysiga oo aan ogolayn dadka uu gumaysto inay yeeshaan dareen oy ka dhiidhiyaan xumaanta ayaa dambigii uu gaystay ardayga ihaanaystay kitaabka quraanka ah ayaa durabadiiba u rogay inay tahay kacdoon siyaasadeed si loogu garbeeyo dambiilaha oo loo sii ihaaneeyo dadka muslimiinta ah dareenkooda.
Waxaan ogsoonahay inay arin noocanoo kale ah ay ka dhacday gobolka Jimma halkaasoo ay kaniisadaha caalamka ka codsadeen Meles inuu difaaco kaniisadaha Evangelical ee la gubayo siday sheegeen, arintaasoo ahayd ciyaar ay dawladda Itobiya doonaysay inay ku abuurto dareen diineed iyo inay tahay xukuumad u taagan difaaca masiixiyada. Arimaha ka bilowday hadda Jaamacadda Jigjiga kama madhna shirqoolada ay maleegaan sirdoonka Itobiya si loo abuuro dareen iska horimaad diineed oy ku macnayso dagaalka lagaga soo horjeedo guamaysigeeda.
subxaanallaah, ilaahaw noo hiili